Inhloko ZeNdaba Ntulikazi 21, 2021
Ntulikazi 21, 2021
Uzulu wamukele ngemibono ehlukile uhlelo oluvumela ukuthi izibhelela ezizimeleyo zihlabe ijekiseni eyeCovid 19 Vaccine, ngoba uzulu uzabe ehlawula amadola akuleli edlula amakhulu amane $434-35 yejekiseni lekamongi ozahlaba edlula amakhulu amabili-$220-64.
Kunje Inani labantu ababulawe yiCovid 19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo babe ngamatshumi amanhlanu-50 Kuthi abantu abedlula inkulungwane ezimbili - 2 683, batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa-1, 447 469 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eyeCovid 19 Vaccine, eZimbabwe jikelele, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha-649,843, asebehlatshwe ijekiseni yesibili.
Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni lokuzivikela kuCOVID-19 ngoba nxa zingasenzanga njalo, aziyi kuthola sizo lokwelatshwa lapho zithe zagula lumkhuhlane. Inyathelo likahulumende leli lisolwa ngabenhlanganiso emela izisebenzi eye Zimbabwe Congress of Trade Unions, abathi lephula amalungelo oluntu.
Abahlali bedolobheni lakoBulawayo bathi izititshi ezithwala ingcekeza yezambuzi zihlezi zidubukile okuyingozi kwezempilakahle.
Izizalwane zeZimbabwe kweleSouth Africa zithi zihlukunyezwe kakhulu ludlakela olwenzakale kweleSouth Africa kumaviki asanda kwedlula kulandela ukubotshwa kwalowo owayengumongameli umnumnzana Jacob Zuma.